MAZANO: 26 GENIUS RELATING TO HACKS - TELES RELAY
HOME » VIDEOS MAZANO: 26 GENIUS KUVARIRA HACKS
MAZANO: 26 GENIUS KUVARIRA HACKS
MAZANO OKUPENYIRA HWEVABEREKI
Tarisa vhidhiyo ino uye uwane mazano eupenyu achaita kuti upenyu hwako huve nyore! Iwe uchawana mutsara weupenyu hwakanaka hwevabereki huchabatsira kugadzirisa zvinetso zviduku uye kunyange kugadzira zvigadzirwa zvakanaka zvisingashande.
Heano mazano makuru ayo mubereki mumwe nomumwe achaonga:
- Ita dambudziko rakashata nemapurasitiki uye tauro
- Dzidza kuti ungakurumidza sei kugadzirisa dzimba dzekushandisa kune dare
- Unogona nyore kukurumidza kuisa ice cream kubva ku yogurt
- Kana uchida tattoo kwenguva pfupi, shandisa mazodzi. Ita chero chishandise chishandise kuvhara uye kuifukidza ne hairspray Kugadzirira!
- Ita apuroni mubhandi repurasitiki kumudzidzisi wako muduku
- Ita chikwata chevana chekuwedzera nehombodo isina chinhu ye shampoo
- Kudzivirira vana kubva pakushandisa sipo yakawanda yemvura nekubatanidza rubber band
- Iwe uchadzidzira kugadzira marudzi akasiyana ezvokupfeka kubva kumapfeko akare
- Edza kuita mwana leggings nemasokisi makuru. cheka chikamu chechiso chemasokisi. Dzvanyira sock pamwe chete. Flip a sock uye roka masokisi maviri pamwechete. Ready!
- Ita jeans evanhu vakuru mumavheji emwana. Tarisa danho redu rekudzidzisa nechitamba
- Deredzai ne t-shirt yekare uye muite jasi rakanaka kana jasi rediki
- Izvi zvinonyanya kukosha kana uchienda nevana vako. Tenga kana kugadzira chisongo iwe pachako nenhamba yako yefoni
- Tinopa mazano akawanda anofadza pamitambo yakakurumidza ichafadza mwana wako kumba
Tsvaga humwe hupenyu huchaita kuti upenyu hwako huve nyore! Iwe uchadzidza kuti ungagadzirisa sei flip inotanga nekushandisa tab tab, uvanze mari mune bhodhoro risina chinhu revharasi, uite tattoo yakanaka yezhizha uye chii chaunofanira kuita nekupisa kwezuva!
00: 26 Emergency Layer
00: 52 Nzira yekugadzirisa dzimba dzezvipi
01: 52 Fast Ice
04: 15 Zvitsva zvevana
07: 50 Jeans yevana
Ichi chidimbu chakaonekwa pakutanga https://www.youtube.com/watch?v=0Bpexf_SUhE
Chirwere cheRopa chinoratidza bartender wekuzvarwa avo vane mhirizhonga Tiger Woods vane THC mumutambo - VIDEO
Kuparara kwekenza kune chiremba mune biochemistry - L'Express
VANHU & VANHU3,575